Halyeey reer Argentina ah oo ka warbixiyay sababta keentay dhibaatada Messi ee kooxda Barcelona – Gool FM
(Barcelona) 22 Sebt 2020. Halyeeyga reer Argentina ee Claudio Caniggia ayaa aaminsan in xiddiga ay isku wadanka yihiin ee Lionel Messi uusan lahayn tayo hoggaamineed, taas oo ah arrinta horseeday dhibaatada dhex martay isaga iyo kooxda Barcelona.
Wargeyska “Sport” ayaa wuxuu shaaca ka qaaday wareysi uu bixiyay Halyeeyga reer Argentina ee Claudio Caniggia, waxaana hadaladiisa ka mid ahaa:
“Messi waxaa laga yaabaa inuu laheyn tayo hoggaamineed, marka ay koodiisa sarreynin aad ayuu u dhibtoodaa”.
“Messi wuxuu xambaarsan yahay masuu’liyado, dabcan wuxuu leeyahay shaqsiyad, ma aqaano waxa dhacay, laakiin marwalba waxaan dhahaa way ku adagtahay inuu arko kooxdiisa oo garoonka ku jirta isla markaana uusan isagu ka sareynin kooxda ka soo horjeeda”.
Claudio Caniggia wuxuu faallo ka bixiyay dhibaatada Messi kala dhaxeysay kooxda Barcelona inta lagu jiray suuqan xagaaga, kaddib markii uu muujiyay rabitaankiisa ah inuu baxo:
“Messi waxaa lagula taliyay qaab qaldan, waxay u sheegeen inuu ku bixi karo qaab qareen, way cadahay in qareenkiisa uusan ku saxnayn fikirkiisa, wayna cadaatay inuusan ka tagi doonin Barcelona”.
Si kastaba ha ahaatee, Lionel Messi ayaa isku diyaarinaya inuu hogaamiyo Barcelona xilli ciyaareedka cusub ee horyaalka Spain, waxayna taageerayaasha Blaugrana rajeynayaan in wiilashooda ay markale awoodi doonaan inay ku guuleystaan horyaalka La Liga, kaasoo xilli ciyaareedkii hore ay ku guuldarreysteen, kaddib markii ay ku guuleystay naadiga Real Madrid.
Josep Maria Bartomeu oo caqabad ku noqday heshiiska uu Suárez ugu dhaqaaqayo Atletico Madrid